Shakti Kapoor “Bollywood-ka wey iska hilmaaneen Kader Khan 10-sano ugu dambeesay qof booqday xitaa naguma jiro!” – Filimside.net
Shakti Kapoor “Bollywood-ka wey iska hilmaaneen Kader Khan 10-sano ugu dambeesay qof booqday xitaa naguma jiro!”
Halyee Kader Khan asigoo 81-jir ah ayuu geeriyooday mana heli doonaan Bollywood-ka badalkiisa madaama uu isku ahaa jilaa door walbo sameyn karo iyo sidoo kale qoraa sheekooyinka ugu caansan fanka Hindiya sameeyeen diyaariyay una dheereed inuu ahaa qof fanka ka dhaxeeyay oo jilaa kasto lasoo shaqeeyay.
Haddaba Shakti Kapoor oo ay Kader Khan aflaan badan isla soo jileen saaxiib dhowna ahaayeen ayaa Bollywood-ka ku eedeeyay inay 10-kii sano ugu dambeesay Kader Khan iska hilmaameen xiliga uu xanuusanaa sidoo kalena uusan jirin qof fanka Hindiya ka tirsan oo Kader booqday isagaba dhaaf inay garab siiyaan.
Shakti oo aad u qalbi jabsan sidoo kalena Kader Khan wuxuu la sameeyay in ka badan 100-filim wuxuu yiri “Dadka Bollywood-ka ka tirsan abaal malahan maxay u xasuusan waayeen Kader sidoo kalena ma jirto cid booqatay 10-kii sano ugu dambeesay ama xaaladiisa ka war doontay waana ayaan daro weyn.”
Shakti oo careesan wuxuu yiri “Dhawaan mar aan Kader Khan booqday aad ayuu iila liitay ogaal badana ma uusan laheyn laakiin markii aan u tagay wuu farxay waana la sheekeestay, balse Bollywood-ka dhawaanahan waxaa dhaqan ka noqotay qofka marka uu geeriyoodo inay baraha bulshada ku xusaan amaantiisa sidoo kalena saxaafada la hadlaan!”
Shakti wuxuu yiri “Buug ayaan ka qori doonaa nolosha Kader Khan wuxuu ahaa hadiyad qaali ah oo Alle noogu deeqay dibna nooga ceshtay laakiin xasuustiisa waa inay raagtaa si jiilkeena xiga u ogaadaan nin weyn inuu fanka Hindiya soo maray.”
Shakti Kapoor wuxuu sheegay markii ugu dambeesay ee uu Kader Khan la kulmay in Kader ku dhahay “Waxaan rabaa inaan fanka kusoo laabto balse filim ma jilaayo ee jilaayaasha dhalinyarada ah ayaan barayaa sida hadalada saxda ah loo adeegsado, fikrado ula imaadaan sheekooyina u curin karaan” Laakiin nasiib daro Kader wuu geeriyooday wuxuuna Shakti sheegay in fanka Hindiya cid bad baadin karto maanta aysan jirin haddiiba ninkii 40-sano ka badan usoo shaqeenayay ay booqan waayeen iskaba dhaaf inay garab istaagaan.